We Fight We Win. -- " More than Media ": အကူအညီတောင်းခံခြင်း
အောက်ပါ video clip ကိုကြည့်ရှုပြီးမြန်မာမိန်းကလေးငယ်များကိုလူမဆန်စွာရိုက်နှက်နှိပ်စက်နေသော
အဲဒါရိုက်တဲ့လူတွေမှာ အပြစ်မရှိပါဘူး ကောင်မလေးတွေက နီပေါတွေ ဘင်္ဂလားတွေနဲ့လိုက် ကုန်းနေလို့ပညာပေးရိုက်နှက်နေတာပါ နေရာက ပီနန်မြို့ပစိပိတ် အနီးမှာထင်ပါတယ်
2 January 2012 at 05:20
Carlos Vela said...
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှားတဲ့ အမှားပါ ... ဒါပေမဲ့ အင်အားသုံးပြီး ဖြေရှင်းတာတော့ မမိုက်ဘူးဗျာ
ဘာ.. ရိုက်တဲ့သူအပြစ်မရှိဘူး.. ဟုတ်လား..။ ဘယ်လို ဦးနှောက်နဲ့ ဘယ်လိုနှလုံးသားမျိုးနဲ့ ပြောထွက်သလဲ..။ ဒီမိန်းကလေးတွေဟာ.. ပြည့်တန်ဆာမကလို့..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. လူကိုလူလိုဆက်ဆံရမယ်..။ ခုလို ပါးနားရိုက်ဆောင့်ကန်တာမျိုး..ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်တာမျိုးကို.. ယဉ်ကျေးတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းက ဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ဘူး..။ ရဲတိုင်ချင်တိုင်.. မိဘကိုတိုင်ချင်တိုင်လို့ရတယ်..။ ၀ိုင်းရိုက်တဲ့ယောက်ကျားကြီးတွေရော..၊ ဒါကိုရှက်စရာလို့မထင်ဘဲဗီဒီယိုရိုက်ဖြန့်တဲ့သူရော..၊ မှန်တယ်လို့ကွန့်မန့်ပေးသူရော.. အင်မတန်သိမ်ဖျင်းတဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့သူတွေပဲ..။ ဒီလူတွေကို အရေးယူဖော်ထုတ်ကြပါ..။
the first person who comment this post,are U fucking dog? even dog don't think is right! U R worse than fucking dog.Fucking pieces of shit.